Sale Representative Archives - Page2of3- Glory Assumption Space
Sales Representative (QP) - Male (5) Posts
Sale Representative (QP) – Male (5)Posts /Salary – 200000 Kyats /Kyimyindaing Township Requirement • English ( influent ) • Personality Skill ( Word , Power Point , Excel ) • Experience at Least2Years Responsibility • Maintain old customers and find new customers • Build good relationship with customers • Regular visit and call back customers • Delivery and loading the products • Cash Collecting • Obey rule and regulations
Sales Representative - Male (10)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောDistribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိပါသည်။ 1. Sales Representative – Male (10)Posts /Salary – 120000 Kyats /Dagon Township - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အရောင်းပိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales Representative Male / Female (6) Posts / Salary - 150,000 Kyats
************************* Ugarent Requirement ************************* 2. Sales Representative Male/Female (6) Posts/Salary – 150,000Kyats/Shwe Pyi Tar Township. - တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့တစ်ခုခု ရရှိရမည်။ -စားသောက်ပိုင်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်ရှိရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Sales Representative - Males (5) Posts
************** URGENT REQUIREMENT ****************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Urgent Post 1. Sales Representative - Male (5) Posts / Salary 200000 Kyats /Kyee Myin DineTownship Requirements - Graduate with any Degree. - Minimum 1 years experiences in FMCG field. - Good communication and interpersonal skill. - Independent , self-motivated and able to work under pressure. - English language is preferable. Responsibilities - Daily sales avtivities according to the way plan. - Cash collection. မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr4@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, Phone No – 09-263256668,09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Sales Admin - Female (5) Posts
************** URGENT REQUIREMENT ****************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Urgent Post 1.	Sales Admin - Female (5) Posts / Salary 150000 Kyats / Mayangone Township Requirements -	ဘွဲ့တစ်ခုခု ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ -	Computer Excel ကောင်းကောင်းသုံးနိုင်ရမည်။ -	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး(၁) နှစ်ရှိရမည်။ - အရောင်းစာရင်းကို Computer Excel နဲ့စာရင်းသွင်းရပါမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ ) [caption id="attachment_711" align="alignnone" width="547"] A beautiful businesswoman looking at camera with working men on background[/caption]
Sales Representative -Male (5) Posts
********************** URGENT REQUIREMENT ************************* မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ 1. Sales Representative (ရုံးချုပ်/ထောက်ကြံ့ရုံးခွဲ) -Male (5)posts/Salary-150000Ks/Dagon Townhip . -ဘွဲ့ရ (သို့) တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - အသက်(၂၀)နှစ်မှ(၂၅) နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။ ညွှန်ကြားချက်များအားအချိန်တပြေးညီလိုက်နာဆောင်ရွက်တတ်သူ ဖြစ်ရမည်။ဈေးကွက်အခြေအနေအားသုံးသပ်ပြီးအရောင်းမြင့်တက်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရမည်။ -သွယ်လက်တက်ကြွစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင်း ကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်ပြီးအများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းသွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Sales Representative (Retail Channel- Cosmetic Background) – Female (5) Posts
************** URGENT REQUIREMENT ****************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 7. Sales Representative (Retail Channel- Cosmetic Background) – Female (5) Posts / Salary 200,000 Kyats / Kyeemyindaing Township Requirements - Graduate with any Degree. - Minimum 1 years experiences in FMCG field. - Good communication and interpersonal skill. - Independent ,self-motivated and able to work under pressure. - English language is preferable. Responsibilities - Daily sales activities according to the way plan. - Cash collection. မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Sales Requirement(Retail Channel)-Male(5)Posts
မင်္ဂလာပါရှင့် ။ Chemical Product Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင် ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Sales Requirement (Retail Channel)-Male (5)Posts/Salary-180000Kyats /Kyimyindine Township Requirements - Graduate and track product costs - Minimum 1 years experiences in FMCG field - Good communication and interpersonal skill - Independent,self-motivated and able to work under pressure - English language is preferable Responsibilities - Daily sales activities according to the way plan - Cash collection Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales Representative(FMCG,Sales & Business Development)-M/F(5)Posts
မင်္ဂလာပါရှင့် ။Chemical Product Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင် ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများအမြန်ရှိသည်။ Sales Representative (FMCG, Sales & Business Development) -M/F (5)Posts/Salary – 200000 Kyats / Kyimyindaing Township Requirements • Graduate with any degree • Minimum 1 year experience in FMCG field • Good interpersonal skill and communication skill • Independent, self-motivated and able to work under pressure • English isaplus Responsibilities • Daily sales activities according to the way plan • Cash collection မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales Representative -M/F(5)Posts
မင်္ဂလာပါရှင့်။တာမွေမြို့နယ်တွင်ရှိသော Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင် ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်းအမြန်အလိုရှိသည်။ Sales Representative – M/F (5)Posts/Salary -130000 Kyats /Tarmwe Township - ၁၀ တန်းအောင် (သို့မဟုတ်)အဝေးသင်တက်ရောက်နေသူ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၁ နှစ်ရှိရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sale Representative –Male (5)Post
- ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိရမည်။	- အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး ၁နှစ်ရှိရမည်။ - နယ်သွားနိုင်သူဦးစားပေးမည်။
Sales Representative ( FMCG) – Male/Female (5)Posts
- ဘွဲ့ရ (သို့မဟုတ်) အဝေးသင်တက်ရောက်နေသူ - Computer ကျွမ်းကျင်စွာသုံးနိုင်ရမည်။ - အပြင်သွားနိုင်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၂ နှစ်ရှိရမည်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်လျှင်ပိုဦးစားပေးမည်။
Sale Repersentative -Male (5)Post
- ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိရမည်။ - အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး ၁နှစ်ရှိရမည်။ - နယ်သွားနိုင်သူဦးစားပေးမည်။
ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ Customer Skill & Interpersonal Skill များနားလည်ပြီး၊ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိသူ၊ အသက် (၂၀) နှစ်မှ (၂၅) နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။ ညွှန်ကြားချက်များအားအချိန်နှင့် တပြေးညီလိုက်နာဆောင်ရွက် တတ်သူဖြစ်ရမည်။ ဈေးကွက်အခြေအနေအားသုံးသပ်ပြီးအရောင်းမြင့် တက်အောင် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ရမည်။ သွက်လက်တတ်ကြွစွာဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင်း ကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်ပြီးအများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်သူဖြစ်ရမည်။
GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မင်္ဂလာတောင်ညွန့်တွင်ရှိသော Trading Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းအမြန်အလိုရှိသည်။ 1. Sales Representative - Male /Female (8 ) Post - Salary 120000 +++ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အသက် ၂၀ နှင့် ၃၀ ကြားဖြစ်ရမည်။ - ဆေးဝါးရောင်းဝယ်နိုင်သည့်အတွေ့အကြုံ ၁ နှစ်ရှိရမည်။ - ရုပ်ရည်ချောမောရမည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr6@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com,gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262256668 , 09 977125251, 09 263121101,09-262223783 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။(အင်းစိန်လမ်းမပေါ်လှည်းတန်းမှတ်တိုင်အနီး )